Isreal Oo Qorshaynaysa In Ay Ka Mid Noqoto Midowga Africa Iyo Sobabta. – Xeernews24
Isreal Oo Qorshaynaysa In Ay Ka Mid Noqoto Midowga Africa Iyo Sobabta.
23. Juli 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa’iil ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Israa’iil ay dib ugu biirayso Midowga Afrika iyadoo noqonaysa waddan kor jooge ah.
Tallaabadan ayaa sida uu qoray wargeys kasoo baxa Israa’iil waxay timid ku dhawaad 20 sano kaddib markii Israa’iil ay waysay xubinnimada ururkan wixii ka dambeeyay markii laga beddalay magaca ee la sameeyay Midowga Afrika.
Waxaa lagu soo warramay in safiirka u jooga Israa’iil magaalada Addis Ababa uu warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay Guddoomiyaha Midowga Afrika, Mousa Faki Mahamat, si uu xubin kormeere ah uga noqdo ururka. Kulankaas ayaa ka dhacay xarunta AU ee caasimadda dalka Itoobiya.
Warbaahinta Israa’iil ayaa soo xigatay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Yair Lapid oo sheegay, “Maanta waxay dabbaal-dag u tahay xidhiidhka Israa’iil iyo Afrika.”
Wuxuu intaas ku daray: “Horumarkan dhinaca diblomaasiyadda ah waa natiijada dadaalkii Wasaaradda Arrimaha Dibadda, laanteeda Afrika iyo safaaradaha Israa’iil ee qaaradda Afrika.”
Wuxuu sidoo kale yidhi: “Tani waxay saxaysaa khaladaadkii jiray ku dhawaad labaatan sano, waana qayb muhiim ah oo ka mid ah xoojinta xidhiidhka dhinaca dibadda ee Israa’iil.”
Lapid ayaa sheegay in Israa’iil ay hadda xidhiidh fiican la leedahay 46 waddan oo ka tirsan Qaaradda Afrika.
Maamulka Falastiiniyiinta ayaa horayba door noocan oo kale ah ugu lahaa ururka Midowga Afrika.
Maxay tahay ujeeddada ay Israa’iil ka leedahay ku biiritaanka Midowga Afrika?
Israa’iil ayaa isku dayaysa in ay adkayso cilaaqaadka kala dhaxeeya 55-ta waddan ee xubnaha ka ah Midowga Afrika, sida ay tabiyeen warbaahinta dalkaas.
Arrimaha kale ee sababta u ah ku biirista AU waxaa ka mid ah in Israa’iil ay doonayso sidii ay u badin lahayd waddamada ugu codeeya arrimaha ay ka doonayso hay’adaha caalamiga ah, sida Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Waxaa kale oo ay Israa’iil doonaysaa inay kala shaqeyso arrimo ay ka mid yihiin la dagaallanka argagixisada, xakamaynta Covid-19 iyo kobcinta ganacsiga beeraha.
Qaar ka mid ah bogagga internet-ka wax ku qora ee Israa’iil ayaa shaaciyay in dowladda dalkaas ay dhawaan xidhiidhkii diblomaasiyadeed dib ula billowday dalalka Chad iyo Guinea, kuwaasoo ay horay xidhiidhka ugu jartay.
Sanadkii 2020-kii, Israa’iil ayaa sidoo kale heshiisyo la saxiixatay Suudaan iyo Morocco.
Bishii May ee lasoo dhaafay, madaxa Midowga Afrika Mousa Faki Mahamat ayaa cambaareeyay duqaymihii ay Israa’iil ka fulisay Marinka Qasa iyo weerarradii ay ciidamada Israa’iil ka geysteen Masjidka Al-Aqsa.
Wuxuu xilligaas sheegay in militariga Israa’iil ay sameynayeen “ficillo gurracan oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah”.
Faki ayaa sidoo kale shir Midowga Afrika ka dhacay sanadkii 2020-kii ku sheegay inuu kasoo horjeedo sida uu maamulkii Donald Trump u wajahayay qorshaha nabadeynta Bariga Dhexe. Sacab badan oo ay u sameeyeen ka qayb galeyaashii shirka ayuu ku kasbaday markii uu sheegay in “Trump ficilladiisa ay hagar daaminayeen xuquuqda dadka Falastiiniyiinta”.
Bayaan uu Faki soo saaray Khamiistii ayuu ku sheegay in Midowga Afrika uu “caddeeyay mowqifkiisa ku aaddan in labo dowladood oo iska barbar dhisan lagu xalliyo arrinta Falastiiniyiinta iyo Israa’iil, taasina ay muhiim u tahay nabadda gobolka.”
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2021/07/au.jpg 172 293 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-07-23 11:34:272021-07-23 11:34:27Isreal Oo Qorshaynaysa In Ay Ka Mid Noqoto Midowga Africa Iyo Sobabta.
Mareeyaha Dhaqtarka magaalada Bike ee Gobolka Sitti Magaaladi Garba-ciise Gurmad la,aan iyo Darxumo